China Pu ntekwasa akwa Manufacture na Factory | Jiashun
Anyị nwere na-echekwa Pu ntekwasa akwa n'ihi na anyị kpọrọ ahịa. Pu ntekwasa akwa na-trumped nke a sịntetik kpara isi ákwà ukwuu n'ime polyester ma ọ bụ naịlọn ihe onwunwe na a waterproofing polyurethane mkpuchi ma ọ bụ laminate. A na-etinye ihe mkpuchi polyurethane ahụ n'otu akụkụ nke akwa ákwà, nke a na-eme ka mmiri na-eguzogide ọgwụ, ịdị arọ dị mfe na mgbanwe. A na-eji akwa anyị eme ihe na akpa akwa, akpa akpa, akpa maka oke ugwu.
OTU NKE 30g
Ugboro abụọ 60g
Ugboro abụọ 150g
1.Otu esi eme usoro
1. Nlele nlele
2. Onye ahịa na-akwụ 30% nkwụnye ego ma ọ bụ na-emeghe LC mgbe ọ natara PI anyị
3. Ahịa na-akwado anyị sample
5. Ahịa na-akwado anyị mbupu sample
6. Kwadebe Mbupu
7. Onye na-ebunye ya na-eme akwụkwọ ndị dị mkpa
8.Client na-akwụ ego itule
9.Supplier na-eziga akwụkwọ mbụ ma ọ bụ telex hapụ ngwaahịa
2. Kedu ka esi ebu ahia?
Anyị nwere ike ịnye mbupute awara awara, ikuku ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri.
3.Gịnị bụ oge LT?
Ọ dabere na ọnụọgụ gị, na-abụkarị 7 ~ 30 ụbọchị.
Nke gara aga: Industrial akwa
Osote: Mixed silicone teepu